कोरोनाको जोखिम अझै पनि कायम नै छ । विज्ञहरुले समेत कोरोना अझै एकवर्ष लम्बिन सक्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिनैपिच्छे कोरोना संक्रमित र मृत्युदरको विवरण सार्वजनिक गर्छ ।
काठमाडौंमा केन्द्रित यातायात व्यवस्था विभागमा २०७३ फागुन ११ गते महानिर्देशकको रुपमा सरकारले रुपनारायण भट्टराईलाई नियुक्ति ग¥यो । जब उनी विभागको महानिर्देशक भएर आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्नतिर लागे उनले सिन्डिकेट हटाउने निर्णय
ट्राफिक प्रहरी नै स्वस्थ भएनन् भने उनीहरूले दिने सेवा प्रभावकारी नहुने हुँदा राज्यले उनीहरूको स्वास्थ्य र सुविधामा ध्यान दिनु जरुरी छ । यसका लागि सडकमा धुवाँ फ्याँक्ने पुराना गाडी पूरै
हाल देशमा देखिरहेको राजनीतिक घटनाक्रमका कारण विभिन्न समस्या खडा भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले समेत सरकार गठनको ८८ दिनपछि पूर्णता पाएको छ । ओलीको मनपरितन्त्र
दशैँमा विशेषतः मासुको बढी मात्रा प्रयोग गरिन्छ । मासु प्रयोग गर्दा सकेसम्म ताजा र कम प्रयोग गर्नु नै स्वास्थ्यका लागि राम्रो मानिन्छ । तर एकचोटि काटेको मासु दशैँभर नै प्रयोग
नेपालमा दिनदिनै राजनीतिक दलहरुमा एकपछि अर्को विचलन देखिन थालेको छ । उनीहरु नीति, विचार र सिद्धान्तबाट विचलित भएका देखिन्छन् । यस्तो विचलन शीर्ष तहका नेताहरुदेखि सामान्य कार्यकर्ता तहसम्मै प्रस्ट देख्न
दशैँ मान्न बर्सेनि कति सर्वसाधारण उपत्यका छोड्छन् ? यो वर्ष दशैँ मान्नको लागि कतिले उपत्यका छोडिसकेका छन् ? यसको यकिन आँकडा सरकारको कुनै पनि निकायसँग छैन । सरकारले तोकेको भन्दा
स–साना राज्यहरूमा बाँडिएका बाइसे–चौबीसे राज्यहरूलाई एकत्रित गरी एउटै देशको सृजना गर्ने पृथ्वीनारायण शाह आधुनिक नेपालको राष्ट्रनिर्माताको रूपमा चिनिन्छन् । उनले स–साना क्षेत्र जस्तै– भिरकोट, कास्की, लम्जुङ, गोरखामा राज्य गरिरहेको शाहवंशलाई
नेकपा एमालेले जनताको सार्वभौम संसद्माथि निरन्तर धावा बोलिरहेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उनले दुईपटक संसद् विघटन गरे ।संसद्को हत्या गरेर तानाशाह बन्न खोजेका ओलीको पतन
हामीले खाएका चिल्ला र अन्य खानेकुराले शरीरमा धेरै कोलेस्ट्रोल जम्मा हुन्छ, जसले मुटुलाई आफ्नो कार्य गर्नमा अवरोध गर्छ । यसका कारण मुटु दुख्ने र हृदयघातसमेत हुने सम्भावना हुन्छ । ब्लकेज,
सरकारले केही समयअघि दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी ग-यो । केही समयमा निश्चित उद्देश्य प्राप्त भएपछि अहिले फेरि फिर्ता लिएको छ । सोमबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्त्री
पछिल्लो समय उमेरको अनुपातमा धेरै तौल अर्थात् मोटोपन भएका मानिसहरुको संख्या बढ्दो छ । दुब्लो पातलो व्यक्ति सधैँ मोटाउन के गर्नुपर्छ भनेर चिन्तामा परिरहेको हुन्छ भने मोटा व्यक्ति कसरी घट्ने
चाडबाडको नाममा लुटिँदै जनता
नेपालीहरुको महान् चाड दशैं–तिहार नजिकिसकेको छ । विशेषतः हिन्दूहरुको महान् चाडको रुपमा दशैं–तिहारलाई लिइन्छ । चाडबाडको बेलाको उत्साह, हर्ष नै एकदमै फरक खालको हुन्छ । वर्षमा एकचोटि आउने दशैं–तिहारलाई बडो
फुटपाथे पसलका कारण मुख्य सडक अस्तव्यस्त
देशैभरका हरेक जिल्लाको सदरमुकाम र उपत्यकाभित्रकै चोक, गल्ली साँझ परेपछि फुटपाथ व्यापारले भरिपूर्ण हुन्छन् । सडकपेटीभरि फुटपाथ व्यापार सञ्चालनमा छन् । अझै काठ्माडौं, भक्तपुर र ललितपुरको फुटपाथहरुमा त पाइला राख्ने
सरकारभन्दा शक्तिशाली भएका छन् यातायात व्यवसायी । दशैँको अग्रिम टिकट खुल्ने निश्चित छैन । दशैँ मान्न घर जाने जनताले दुःख पाउने भए । दशैँलाई लक्षित गरेर खोल्ने भनेको अग्रिम टिकट
मानव सम्यताको इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा मानव जातिले महामारीविरुद्ध लडेको छ । मानवीय र भौतिक क्षतिका बाबजुद पनि मानिसले संकटमाथि विजय हासिल गर्दै मानव सभ्यताको यात्रालाई अगाडि बढाइरहेको छ । एक्काइसौँ
जनताको बाँच्ने अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्दछ । जनता देश विकासका मेरुदण्ड हुन् । अहिलेको हावापानी, खानपिनको प्रत्यक्ष असर हाम्रो स्वास्थ्यलाई परिरहेको छ । जसले गर्दा दिनदिनै दीर्घकालीन रोगीहरुको संख्या वृद्धि भइरहेको
कान मानिसको प्रमुख ज्ञानेन्द्रियमध्येको एउटा महत्वपूर्ण अंग हो । कानको बाहिरी आकृतिले मानिसको शारीरिक शोभा बढाउने काम गर्दछ । कान मानिसको अनुहारको दायाँ–बायाँ भागमा हुन्छ । कानको मुख्य काम सुन्ने
देशैभरि हरेक जिल्लामा गरिब जनताका छोराछोरी पढून्, केही गरुन् भनेर कति दानी व्यक्तिहरुले जग्गा दान दिएका हुन्छन् । त्यो जग्गामा सरकारी स्कुल बनोस् गरिबका छोराछोरीले पढ्न पाऊन् र भोलि गएर
देशभर एमसीसीको चर्को विरोध भइरहेको बेला विभिन्न दलसँग सम्बन्धित आधिकांश सांसद र पार्टीका कार्यकर्ता नेपाल र नेपालीको अस्तित्व जोगाउनुपर्छ भन्नेमा बोलेको देखिँदैन । वास्तवमा अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनप्रति सत्ताधारी